मानिसको टाउकोमा सिंङ पलाएपछि… - Aarthiknews
तस्वीर– पञ्जाब केशरी डट इनबाट
काठमाडाैं । मानिसको सिंग हुँदैन, यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । यो प्राकृतिक कुरा पनि हो । सिंग केही जिवजन्तुहरुको मात्र हुन्छ । सिंगले जनावरलाई बाहिरी आक्रमणको प्रतिकार गर्न मद्दत गर्दछ । तर के तपाईले कुनै मानिसको सिंग देख्नुभएको छ ? पक्कै छैन होला । किनकी मानिसको सिंग हुँदैन ।
साना नानीहरु तथा केही जात्रा, मेला वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा युवाले बत्ति बलेको प्लाष्टिकको कृत्रिम सिंग लगाउने गर्दछन् । मानिसको सिंग नहुनु कुनै नौलो कुरा होइन, तर कोही मानिसको सिंग छ भन्यो भने तपाई पत्याउनु हुन्छ ? पक्कै पत्याउनु हुन्न ।
भारतको मध्य प्रदेशको सागर जिल्लामा रहेको रहली गाँउमा बस्ने ७४ वर्षीय श्यामलाल यादवको टाउको सिंग पलाएको थियो । कुनै जनावरको सिंग झै बलियो र कडा श्यामलालको सिंग चार इञ्च भन्दा ठूलो थियो ।
श्यामलालका अनुसार ५ बर्ष पहिले टाउकोमा चोट लागेसंगै पलाउन शुरु गरेको सिंग विस्तारै ठूलो हुँदै गएको थियो । टाउको सिंग पलाएसँगै श्यामलाल शुरुवातमा निकै डराएका थिए । उनले पलाएको सिंग काट्ने निकै प्रयास गरे तर काट्दा पनि केही समयमा सिंग पलाएर आइहाल्थ्यो ।
सिंग काट्दा पनि नजाने तथा बढ्दै गएपछि श्यामलालले केही वर्ष निकै कष्टपूर्ण जीवन भोग्नुपर्याे । उनी सिंग पलाउने समस्या लिएर चिकित्सककोमा समेत पुगे । तर उनको टाउको सिंग देख्ने बित्तिकै धेरै चिकित्सक डराए र उपचार गर्न नसक्ने बताए । केही चिकित्सकले भने सिंग हटाउन निकै महंगो शुल्क लाग्ने बताए ।
श्यामलालसँग पर्याप्त रकम नभएका कारणले उनले सिंग पलाउने समस्या सहनुपर्याे । तर श्यामलालको समस्या थाहा पाएपछि सागर शहरको भाग्योदय नामक अस्पतालका चिकित्सकले उनको सिंग अप्रेसनको माध्यमबाट हटाउन सकिने बताए ।
केही दिन अघि सोही अस्पतालका चिकित्सकको टोलीले उनको सिंगको अप्रेसन गरी त्यसलाई जरैबाट हटाइदिए ।
अप्रेसनमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार श्यामलालको समस्या दुर्लभ प्रकारको सेबेसियस हर्न नामक बिरामिले गर्दा भएको हो । मानिसको टाउकोमा सेबेसियस ग्ल्याडबाट निस्कने तथा ठुलो हुने गर्दछ ।
श्यामलालको टाउकोमा लागेको चोटका कारणले उनको सो ग्ल्याड बन्द भई निस्कनु पर्ने द्रब्य निस्किन पाएन, र सोहि द्रब्य जम्मा भई सिंगको रुप धारण गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । अप्रेसनपछि श्यामलाल यादब बिना सिंगको जीवनयापन गरीरहेका छन् ।
दुई सय ३५ यात्रु बोकेर फर्कियो कोरियन एयर
कर्णालीमा थपिए ७५ जना कोरोना संक्रमित
५० लाखसम्म आय भएका करदातालाई ५० प्रतिशत कर छुट